SAWIRRO:-Farmaajo iyo Madaxda M/Goboleedyada oo kulan ku yeeshay Afisyooni – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
SAWIRRO:-Farmaajo iyo Madaxda M/Goboleedyada oo kulan ku yeeshay Afisyooni
Ardaan Yare 22 March 2021
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa Goor dhow kulan hordhac ah ku yeeshay Teendhada Afisyooni.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ee xilka sii-haayo Maxamed Xuseen Rooble iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Finish, waxaana intiisa badan diirada lagu saaray Ajendaha looga hadlayo Shirka Madaxda oo ay soo qaban-qaabisay Beesha Caalamka ee ka dhacaya Afisyooni.
Maamulka Puntland ayaa qaadacay ka qeyb galka shirka Madaxda ee Magaalada Muqdisho ka furmaya, waxaana Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland oo hadlay uu sheegay in Shirkaas aysan ka qeyb geli doonin, maadaama aan lagu soo wargelin.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe laga shaki qabo inuu isna ka qeyb gelin Shirka looga hadlay khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada ka dhaceysa Soomaaliya.
Puntland iyo Jubbaland oo shuruudo cusub ku xiray ka qeyb galka Shirka